Oui Non Parfois Afficher les résultats. Manao ahoana toa tsy mande ilay lien ahafahana mahazo ilay logiciel? Mangataka ity logiciel ity aho julio Izaho afaka manampy anao raha misy zavatra mahaliana anao momba ny Baiboly gasysoft: Tsy mandeha intsoiny ilay lmioen anareo ao amin’ny OneDrive: Ity ny adresse mail:
Tena sambatra, misaotra an’ mpanambotra de misaotra an’ Jesosy Kristy Tompo, ho Azy irery anie ny voninahitra, maranata. Tena tsara tokoa finirana hetahetanao. Izaho dia efa niezaka nanao téléchargement tamin’ny téléphone-ko blackberry dia nahazo tokoa saingy tsy mety misokatra ilay smartbaiboly fa izao no soratra miseho eo hoe: Misaotra betsaka fa azoko ihany ilay application ny farany. Maiarahaba anao amin’ny anaran’i Jesoa Kristy. Na koa afaka alefanao mail aty amiko mivantana. Misy teny tiako ho hita ny toko sy andininy HAsiniavo:
Tena mila ilay locigiel tokoa raha mba afaka mahazo e. Mahereza amin’ny asan’ny Tompo. Maiarahaba anao amin’ny anaran’i Jesoa Kristy. Vao nanandrana naka aho teo fa nahazo. Averiko eto indray ilay izy:. Toa tsy mety mandeh mantsy le izy. Mba maniry hahazo an’ilay logiciel « Ny baiboliko 3.
Noho ny fahateren’ny fotoana, dia izao vao afaka namaky indray ny commentaire-tsika rehetra. GasySoft Antananarivo Madagasikara gasysoft gmail. Mandehana ao amin’ny lien Mana isan’andro fa misy zavatra mahasoa isan’andro ao. Maintenant, vous pouvez consulter la bible en 3 langues différentes, en malagasy, en français ou en anglais. Betsaka ny olona no manoratra sy miantso, mangataka ny bwiboly hamoahana ny version mobile ny Ny Baiboliko.
Misaotra betsaka fa azoko ihany ilay application ny farany. Ho tahian’Andriamanitra isika rehetra indrindra izay nahatotosa izay sanga n’asa tsara izao.
Ny olana anefa dia izao: Vous pouvez aussi lire la Bible en 3 langues différentes: Averiko eto indray ilay izy: Ho anareo izay mila fanazavana sns, azonareo atao ny manoratra mivantana aty amiko. Raha mba misy olona afaka manampy ahy dia isaorako mialoha. Il vous permet aussi de faire des recherches par verset ou par mots clés.
Tsara be sy manampy o Misaotra Baibkly. Mankasitraka indrindra satria tsara tokoa ilay izy. Miarahaba antsika rehetra, ialana tsiny raha izao vao afaka mamaly antsika rehetra. Dia misaotra mialoha sahady ho an’izay mamaly dia samy ho tahian’Andriamanitra isika rehetra e!
Tena sambatra, misaotra an’ mpanambotra de misaotra an’ Jesosy Kristy Tompo, ho Azy irery anie ny voninahitra, maranata Répondre. Misy teny tiako ho hita ny toko sy andininy HAsiniavo: Na koa afaka alefanao mail aty amiko mivantana.
Tokony mbola mandeha ireo rohy fangalana ilay Baiboly. Bjr, za zany miasa amin’ny orin’asa iray e!
Izaho afaka manampy anao raha misy zavatra mahaliana anao momba ny Baiboly gasysoft: Mety misy vahaolana ve. Afaka mba mahazo ve baibply aty an-trano sy aty am-piangonana. Faly aho fa manana ny Baiboly ho isan’ny fitaovana ampiasaiko isan’andro ato amin’ny solosaina.
Tsy mandeha intsoiny ilay lmioen anareo ao amin’ny OneDrive: Mikasika ny sosokevitra indray, azonao atao ny manoratra bxiboly amiko mivantana ahafahantsika miresaka misimisy kokoa agape1.
Créer mon blog Créer mon compte. Voaray ny adiresinao fa miezaka ny mandefa an’ilay logiciel a zao.